Bit By Bit - Okwu Mmalite - 1.5 ndepụta nke akwụkwọ
Akwụkwọ a haziri gburugburu a progression site anọ sara nnyocha na-eru nso: edebe omume, ịjụ ajụjụ, na-agba ọsọ nwere, na-eke uka mmekota. Anọ ndị a na-eru nso a niile ji na ụdị ụfọdụ afọ 50 gara aga, na m obi ike na ha niile ga-eji na ụdị ụfọdụ 50 afọ gachara. M na raara otu isiakwụkwọ nke ọ bụla obibia. Ọtụtụ n'ime isiakwụkwọ nwere a ngalaba tinyeworo n'ihu ikowa, a oru ma ọ bụ akụkọ ihe mere eme odide ntụkwasị, na omume ndị na-eji na a na klas ma ọ bụ n'ihi na onwe onye na-amụ. N'ihi na atụmatụ ndị a, m na-aga na-isi ederede dị mfe dị ka o kwere omume; i nwere ike na-ezo aka ndị a n'akụkụ ndị ọzọ nke isi ma ọ bụrụ na ị ga-achọ nkọwa ndị ọzọ na ịma n'ime akwụkwọ ndị ahụ.
Na isi nke 2 (Idebe ihe omume), m ga-akọwa ihe na otú na-eme nnyocha pụrụ ịmụta site n'idebe ihe ndị o si mee. Karịsịa, m ga-elekwasị anya na dijitalụ Chọpụta data na nhazi data ebe na-eme nchọpụta enweghị ọrụ na ihe e kere eke nke data. Aga m na-akọwa nkịtị atụmatụ a ụdị data, na Aga m kọwaa ụfọdụ nnyocha azum na ike ga-eji na-aga nke ọma na-amụta site kwuru, omume.
N'isi nke 3 (Ịjụ ajụjụ), m ga-amalite site n'igosi ihe na-eme nnyocha nwere ike ịmụta site na-akpụ akpụ n'ofè edebe omume na-amalite inwe mmekọrịta ndị mmadụ. Karịsịa, m ga-arụ ụka na na nnukwu abamuru na-eme nnyocha e mere nnyocha, ọbụna na a ụwa ejupụtakarịkwa na-ama ẹdude digital data. M ga-atụle omenala na ngụkọta e mere na njehie kpuchie na iji ya iji hazie ihe ndị dijitalụ afọ enyere maka nnyocha e mere nnyocha. Karịsịa, m ga-egosi otú dijitalụ afọ nwere ike ịkpata nnukwu mgbanwe nlele na ajụjụ ọnụ. N'ikpeazụ, Aga m na-akọwa abụọ azum n'ihi na ijikọta nnyocha e mere data na dijitalụ Chọpụta data. N'agbanyeghị enweghị nchekwube na ụfọdụ nnyocha e mere na-eme nnyocha ugbu a mma, m na-atụ anya na dijitalụ afọ ga-abụ ọlaedo afọ nke nnyocha e mere nnyocha.
Na isi nke 4 (gbara nwere), m ga-amalite site n'igosi ihe na-eme nnyocha nwere ike ịmụta mgbe ha kwaga n'ofè edebe omume na-arịọ nnyocha e mere ajụjụ. Karịsịa, m ga-egosi otú enweghị usoro na-achịkwa nwere-ebe na-eme nchọpụta na-eme ihe ndị dị n'ụwa na a kpọmkwem ụzọ-enyere-eme nnyocha na-amụ banyere causal mmekọrịta. M ga-eji tụnyere iche iche nke nwere na anyị pụrụ ime ihe ndị gara aga na iche iche na anyị nwere ike ime ugbu a. Na na ndabere, Aga m na-akọwa ahia-offs abuana ke isi ihe abụọ azum n'ihi na-eduzi digital nwere. N'ikpeazụ, m ga-ekwubi na ụfọdụ imewe ndụmọdụ banyere otú ị nwere ike iri uru nke ihe ihe ike nke dijitalụ nwere na-akọwa ụfọdụ n'ime ibu ọrụ na-abịa na na ike.
Na isi 5 (Ịmepụta uka mmekota), m ga-egosi otú na-eme nnyocha nwere ike ịmepụta uka collaborations-dị ka crowdsourcing na nwa amaala sayensị-iji na-eme na-elekọta mmadụ nnyocha. Site n'ịkọwa ihe ịga nke ọma uka mmekota oru na site na-enye ole na ole isi Ịhazi ụkpụrụ, m na-atụ anya doo gị nke abụọ: nke mbụ, na uka mmekota nwere ike harnessed na-elekọta mmadụ nnyocha, nke abụọ, na-eme nnyocha na-eji uka mmekota ga-enwe ike idozi nsogbu na mbụ yiri gaghị ekwe omume. Ọ bụ ezie na uka mmekota na-akwalite dị ka a ụzọ zọpụta ego, ọ bụ ihe karịrị na. Mass mmekota adịghị nnọọ ekwe ka anyị mee nnyocha dị ọnụ ala karịa; ya enye anyị ohere ime nnyocha mma.
Na isi 6 (Ethics), M ga-arụ ụka na ndị nchọpụta Ubara ike n'ebe sonyere, nakwa na ndị a ike na-agbanwe ngwa ngwa karịa anyị norms, iwu ya, na iwu. A Nchikota-amụba n'ike na enweghị nkwekọrịta banyere otú ya na ike ga-eji na-epupụta ndị na-ebughị na-eme nnyocha n'ọnọdụ siri ike. Lebara nsogbu a, m ga-arụ ụka na-eme nnyocha kwesịrị ịmụta a ụkpụrụ ndị dabeere na obibia. Ya bụ, na-eme nnyocha kwesịrị ịtụle ha research site ẹdude iwu-nke m ga-dị ka nyere-nakwa site n'aka ndị ọzọ n'ozuzu usoro ziri ezi ụkpụrụ. M ga gwa Abigel anọ guzosie ụkpụrụ na abụọ usoro ziri ezi frameworks pụrụ inye aka n'iduzi gị mkpebi. N'ikpeazụ, Aga m na-akọwa na tụlee ụfọdụ kpọmkwem usoro ziri ezi ihe ịma aka ndị m na-atụ anya ga-eji gakwuru ndị nnyocha na-eme n'ọdịnihu, na Aga m na-enye bara uru Atụmatụ na-arụ ọrụ na mpaghara na-edozibeghị ụkpụrụ ọma.
N'ikpeazụ, na isi 7 (The n'ọdịnihu), m ga-ichikota atọ themes na recur gafee isi na nke ga-mkpa karịsịa ke ini iso.
Social nchọpụta na dijitalụ afọ ga-ikpokọta ihe ndị anyị mere n'oge gara aga na dị nnọọ iche ike nke ga-eme n'ọdịnihu. N'ihi ya, na-elekọta mmadụ research ga-akpụzi ma na-elekọta mmadụ ọkà mmụta sayensị na data ọkà mmụta sayensị. Ọ bụla otu nwere ihe ọ ga-eme, ma ọ bụla otu nwere ihe ọ ga-amụta.